कर्मचारी सञ्चयकोषको लगानी चार खर्ब ३६ अर्ब, सञ्चयकर्तालाई के-के सुविधा छन ? « Janata Times
२०७८, ५ कार्तिक शुक्रबार
३१ भाद्र २०७८, बिहीबार ००:००
कर्मचारी सञ्चयकोषको लगानी चार खर्ब ३६ अर्ब, सञ्चयकर्तालाई के-के सुविधा छन ?
काठमाडौं, भदौ ३१ । कर्मचारी सञ्चयकोषले कूल लगानी सवा चार खर्च नाघेको छ । कोषले गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्म कूल लगानी ४ खर्ब ३६ अर्ब ५४ करोड पुर्‍याएको हो । कोषले विभिन्न आयोजना, परियोजना तथा संस्थामा ऋण तथा सेयर लगानी गर्छ ।
कोषले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार कूल स्रोत ४ खर्ब ४४ अर्ब ४७ करोड पुगेको छ भने जगेडा कोषमा ४० अर्ब १६ करोड बचत छ । सञ्चयकर्ताको सञ्चय कोष मौज्दात रहेको रकम ३ खर्ब ९८ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ छ । निवृत्तभरण कोषमा १ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ छ भने कोषलाई ४ अर्ब ६७ करोड दायित्व छ । कर्मचारीलाई सञ्चय कोषले सञ्चित रकममा ६.५० प्रतिशत ब्याज उपलब्ध गराउने गरेको छ । कोषले आर्थि वर्ष २०७६र७७ को खुद मुनाफाबाट सुरु मौज्दातको आधारमा एक प्रतिशत मुनाफा प्रदान गर्ने घोषणा पनि गरेको छ ।
सञ्चयकर्तालाई सञ्चय कोषमा रहेको रकमको ८० प्रतिशतसम्म विशेष सापटी लिन पाउँछन् । जसको ब्याजदर ७।६० प्रतिशत छ । घर निर्माण गर्न वा घर खरिदमा अधिकतम एक करोडसम्म ७.९० प्रतिशत ब्याज छ । घर मर्मतमा पनि ७.९० प्रतिशत ब्याजरदमा ऋण लगानी हुन्छ । ७।९० प्रतिशत ब्याजदरमा शैक्षिक ऋण लिन पाइन्छ भने ८ प्रतिशतमा सरलचक्र कर्जाको सुविधा छ ।
कोषले दुर्घटना क्षतिपूर्ति योजना, काजक्रिया अनुदान खर्च, सुत्केरी तथा शिशु हेरचाह योजना र संचयकर्ता औषधोपचार तथा घातक रोग बीमा योजना गरी सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । कर्मचारी सञ्चयकोष बिहीबारबाट ६०औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ ।
दशैंको टीका थाप्न आएका कार्यकर्ताले दाम राखेर प्रधानमन्त्रीको खुट्टा ढोगेपछि (भिडियोसहित)
सुकुटेमा प्रचण्डको मस्ती, साँझमै गरे र्याफ्टिङ (भिडियोसहित)
काठमाडौं, कात्तिक ४ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड रिफ्रेस हुन भन्दै सिन्धुपाल्चोकको
आईफोन १३ को प्रि–बुकिंग सुरु, यस्तो छ चार मोडलको मूल्य ?
काठमाडौं, कात्तिक ४ । नेपालमा एप्पलको लागी एकमात्र आधिकारिक राष्ट्रिय वितरक जेनेरेसन नेक्स्ट कम्युनिकेशन प्राइभेट
ग्लोबल आइएमई बैंकले ल्यायो ‘ग्लोबल आइएमई हाइब्रिड बचत खाता’ यस्तो छ सुबिधा
काठमाडौं, कात्तिक ४ । यस बचत खाताको समयावधी ग्राहकहरुको इच्छा अनुसार १ वर्षदेखि ५ वर्षसम्मको
बाढी–पहिरोमा परि १०१ जनाको मृत्यु, ४० जना घाइते
काठमाडौं, ४ कार्तिक । देशका विभिन्न ठाउँमा बाढी, पहिरो र डुबानमा परि आज बिहीवार दिउँसोसम्म
एमाले रामेछापले सक्यो अधिवेशनको तयारी
काठमाडौं, कात्तिक ४ । नेकपा एमाले रामेछापले जिल्लाका विभिन्न तहको अधिवेशनको तयारी सकिएको जनाएको छ
गठबन्धनले गर्‍यो मुख्यमन्त्रीमा राजेन्द्र पाण्डेको नाम प्रस्ताव
हेटौंडा, कात्तिक ४ । बाग्मती प्रदेशसभामा बैठकमा गठबन्धनका तर्फबाट मुख्यमन्त्रीमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रदेशसभा संसदीय
रहेनन् सबैका प्रिय मोहन सर, दुर्घटनामा गुमाए ज्यान
सीपी लोहिया, बैतडी । बैतडीको पाटन बजारस्थित पाटन बहुमुखी क्याम्पसका उप–प्राध्यापक मोहन जोशीको भारतको पिथौरागडमा
मुख्यमन्त्री शाक्यले प्रदेशसभामा मागिन विश्वासको मत
हेटौंडा, कात्तिक ४ । बागमती प्रदेशकी मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले प्रदेशसभामा विश्वासको मत माग्नुभएको छ ।